Dharka iyo kabaha sare, tandem qumman ee jiilaalka | Bezzia
Maria vazquez | 10/01/2022 18:00 | Maxaan xirtaa
Dhawr sano ka hor gudaha Bezzia waxaan horay u soo jeedinay tandem tan sida fiican u shaqeysa xilliga qaboobaha. Kadib isku darka goono iyo kabo sare Waxay ahayd mid ka mid ah isbeddellada waaweyn ee xilli-ciyaareedka, inkasta oo sannadkan aynaan ku sifayn karin sidaan oo kale, haddana waa beddel weyn.
Kabaha dhaadheer ayaa si gaar ah u shaqeeya sanadkan oo leh laba nooc oo goono ah: Koofiyadaha gaaban ee gaaban iyo kuwa dhaadheer ee dhaadheer ayaa qaadan kara jeexan iyo qiyaaso kala duwan, sida aad ku arki karto sawirada aan u dooranay inaan kugu dhiirigelinno.
1 Iyada oo goonooyin gaaban
2 Goono dhaadheer
Iyada oo goonooyin gaaban
Dharbaaxo yaryar ama gaaban gaaban ayaa noqda ikhtiyaarka ugu horreeya ee xirashada tandem caan ah jiilaalkan. Waxaad sharad kartaa on goonooyin maro hore oo qurxin leh ku dhiiraday todobaatanaadkii. Laakiin sidoo kale loogu talagalay kale oo dheeraad ah oo miyir-qabka ah ee midabada dhexdhexaadka ah.
Ku dar iyaga a poloneck codad dhexdhexaad ah oo aan xadin iftiinka iyo kabaha sare ee madow ama brown. Ha iloobin sharabaadyada, inta dabiiciga ah ayaa ka sii fiican. Iyo si loola dagaallamo qabowga, ku dheji jaakad dheer sida Tiffany, kaas oo muuqaalkiisu naga dhigay jacayl.
Ka mid ah goonooyinka dhaadheer ma jiraan isbeddel cad oo kala duwan oo suurtogal ah ayaa kordha. The goonooyin dilaacay oo ku jira maro dhogor ah Waxay u taagan yihiin beddelka caadiga ah oo had iyo jeer xarrago leh. Ku sharad sida Zina goonno dhawaaq diiran leh iyo funaanad iyo kabo madow haddii aad rabto inaad si badbaado leh u ciyaarto.
ka sets monochrome Gooyo iyo funaanado tolsan ayaa ah beddel kale oo weyn. Sanadihii ugu dambeeyey noocyo tolmo leh waxay gaareen magac weyn, gaar ahaan kuwa loogu talagalay inay na siiyaan raaxada ugu badan.
Laakiin dib ugu noqoshada goonnada tandem iyo kabaha sare, ma rabno inaan dhameyno annaga oo aan ka hadlin laba muuqaal oo aad u kala duwan oo nagu qanciyay 100%: Ellen's, oo ka kooban maro madow oo mug leh iyo jaakad-cagaaran leh iyo kabo aan kari karno. u kala saar sida casriga ah iyo miyir-qabka; iyo Rocky's, oo ka kooban maran qaabaysan oo farxad leh, funaanad tolan oo isku midab ah iyo kabo is barbar dhigaya.
Kee baad doorbidaysaa?
Sawirro - @tineandreaa, @lay_tiffany, @zinafashionvibe, @abdisalaam, @abdihakin_abdi, @jennymwalton, @nacaybtire, @ariviere, @abdihakin_abdi
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Maxaan xirtaa » Dharka iyo kabaha sare, isku-dhafka saxda ah ee jiilaalka
Sida Badbaado Loogu Nadiifiyo Dhegahaaga